Yakanaka Policy, Mission & Maitiro - Shanghai Chigong Industrial Co, Ltd.
Hunhu chikamu chakakosha chebasa redu uye yakakosha bhizinesi tsika. Izvi zvinotungamira zviito zvedu kuona kuti tinounza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kugutsa zvinodiwa nevatengi vedu. Yedu yemhando yemitemo ine yedu Mission, Maitiro uye Kuzvipira kuKuenderera Kuvandudza.
Kugadzira yega yega chinongedzo checheni yedu yesimba rakakwanisika rekubata zvinhu zvinotakura & mitoro.
Hukama hunoremekedza uye hunokosheswa
Isu tinogara tichishingirira kuvaka hukama hwakavimbika, husingaperi nevanhu vedu, vatengi, uye vanotipa nekuti izvi zvakakosha pakubudirira kwedu kwenguva refu.
Isu tinotenda mukubatana nezvikwata zvine simba zvekuendesa mhedzisiro.
Kupa simba uye kuzvidavirira
Ticharamba tichitungamira masimba ekuzvidavirira kuburikidza nematanho ese esangano kuitira kuti tiite zvinangwa zvebhizinesi redu.
Kutendeseka kwakazara nekuvimbika kwakakwirira
Tinozvibata nekuvimbika nguva dzese.
Kunaka mukuitwa pamwe nekuenderera kwekuvandudza
Isu pakupedzisira tichazadzisa yedu yemari mhedzisiro uye nekuvaka vakavimbika vatengi nekukwirisa kuuraya mune ese mativi ebhizinesi redu.
Semunhu anoshandira munharaunda, SCIC yakazvipira kudzosera kunharaunda.
KUZVIPIRA KURAMBA UCHITSIMBISA
SCIC yakazvipira kuve nyika inovimbwa inotungamira inogadzira & mutengesi weakakomberedzwa simbi yekubatanidza ngetani nekudyara muvanhu vedu nemaitiro kuitira kuti ugone kununura chiyero chehunhu, kuvimbika, uye mutengo unosangana nezvinodiwa nevatengi vedu.
Kuzadzisa chishuwo chedu chekuve anozivikanwa indasitiri mutungamiri, takazvipira kuramba tichivandudza zvinotevera kuti tisangane nebasa redu:
Isu tinotarisa pakuronga zvine hungwaru kuona kuti Quality Management Sisitimu inonyatso chengetedzwa uye zvinangwa zvemhando yepamusoro zvasimbiswa musangano rese kune izvo zvinokanganisa zvigadzirwa zviri kugadzirwa. Zvinangwa izvi zvinoyera uye zvinoenderana nezvinangwa zvedu zvekuramba tichivandudza kunaka kwezvigadzirwa zvedu.
Isu tinoisa mari mukuvandudza kwevashandi vedu kusimudzira nekusimudzira kutora chikamu kwevashandi uye kuita musangano wese. Ichi chinhu chakakosha kuchengetedza edu emhando yepamusoro zviyero.
Isu tinoramba tichiedza kuvandudza mashandiro edu kuburikidza neyakaonda maitiro ekugadzira.
Isu tinoisa mari mumuchina michina pazvinokwanisika kudzikisa kusiana, kuremara, uye marara.
Isu tinotarisa pakuvaka hukama hwakasimba uye hunogara pamwe nevatengesi kuona kuti zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa nemhando yepamusoro yezvinhu.
Isu tinoona kuti zvivakwa zvedu nemidziyo zvinochengetedzwa zvakanaka, izvo zvinopa nzvimbo yekushanda yakachengeteka, isina rusarura iyo inosimudzira uye inokurudzira kutora chikamu uye kuita musangano wese